DAAWO:In Ka Badan 40 Mayd oo Hargaysa lagu soo bandhigay & Shacabkii oo kala cararay – Puntlandtimes
DAAWO:In Ka Badan 40 Mayd oo Hargaysa lagu soo bandhigay & Shacabkii oo kala cararay
November 14, 2018 Puntland PL
BURCO(P-TIMES) – War deg deg ah oo hada naga soo gaarey magaalada Hargaysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa sheegaya in goor dhoweyd halkaasi lagu soo bandhigay in ka badan 40 mayd oo la sheegay in masuuliyiin ku jiraan.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland ayaa maydadkan la wadaagay warbaahinta waxaana ay faah faahin ka bixiyeen qaabkii ay ku dhinteen dadkaasi iyo cidii ka dambaysay dilka loo gaystay sida ay hadalka u dhigeen., Halkaan Ka daawo muuqaalkaas
Jaahil’nimadu waa cudur halis ah. Lafahaasu waxaa dhici kadha in ay jiraan kumaankun oo sano ama ay ka horeeyeen wakhtigii ismaamku ku xidideeystay somalia. Xabaalo waradeed aad u faraban ayaa laga helay dhulka somaalidu ku nooshahay oo idil. Ayaku se sidee ku ogaadeen haybta dadkii lahaa lafahaan ama wakhtiga ay dunida ku noolaayeen. Walow xaataa hadii DNA laga qaado lama ogaan karo haybtooda inkastoo la qiyaasi karo wakhtigay dunida ku noolaayeen. Sida kaliya ee DNA loogu ogaankaro haybtooda waa ayaadoo daad ay dhiig sokeey wadaan oo loo txraaco la helo.
Hadii daadkaas lafahaas leh la xasuuqay hadee cida kaliya oo loo maleyn karo waa qowmiyadii Ajuuraan oo somalidu xasuuqday lix boqol oo sano ja hor.